နိုင်လွန် Hanks Reeling စက် - တရုတ်နိုင်လွန် Hanks Reeling စက်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -FEIHU
နိုင်လွန် Hanks Reeling စက်
FEIHU စက်တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားအရည်အသွေးမြင့်အထည်အလိပ်ချည် Hanks
စက်တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြား Hanks FH24K: ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ stru နှင့်အတူရှိcture, သငျသညျလုပ်ကိုင်ရန်မလွယ်ကူ, သင်အလွယ်တကူစွန်းပြီးနောက်ကြိုးချွတ်စေနိုင်သည်. ဒီအစက်လွယ်ကူသောနိုင်လွန် Hanks တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားနိုင်ပါတယ်.
အသုံးပြုခံ့ တွင် သိုးမွှေးချည်ငင်, ဇာထိုး, ပိုး, နိုင်လွန်ကြိုး, မြင့်သော လမ်းပိုင်းပိုးစက်မှုလုပ်ငန်း, တစ်လိမ်လုပ်ငန်းစဉ်သို့လှိမ့်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်သို့, မှုအတွက်ဆေးဆိုးဖို့ကြိုး၏ပုံသေအရှည် လာမယ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အခွအေနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ZeLun တစ်ဦး Pre-ဆေးလိပ်သောက် High-elastic ကြိုး shrinkagerole play.
ချည်ငင် box ကို options နှစ်ခုရှိပါတယ်:
တဦးတည်းသွပ်ရည်စိမ်ပိုက်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားလူမီနီယမ် မြို့တံခါးဝအောက်ဆိုဒ်ကုသမှုအသုံးပြုသောအလွိုင်း, ကြာရှည်ခံသော.
3. electromagnetic ဘရိတ်
လွန်ခဲ့သော : ပိုးနိုင်လွန် Hanks Reeling စက် Spinning သိုးမွှေး
နောက်တစ်ခု : polyester Fiber Hanks Reeling စက်